Mashaariicda ay soo bandhigeen dadka madoow ee reer Minnesota, dadka asaliga ah, iyo dadka farshaxanka midabka leh ayaa soo bandhigaya sheekooyin shaqsiyadeed oo ka hadlaya kala duwanaanta, aqoonsiga iyo arrimaha bulshada maanta.
The Saint Paul & Minnesota Foundation wuxuu ku dhawaaqayaa in mashaariicda farshaxanka ee "Farshaxanka xilligan xaadirka ah," oo ah hindise aasaasi ah oo ay taageerayaan hay'adda McKnight Foundation, laga daawan karo spmcf.org/art. Barxadda internetka ayaa lagu soo bandhigayaa farshaxanka xubnaha bulshada Madow, Minnesota, iyo Dadka Midabka (BIPOC) ee gobolka Minnesota oo dhan.
"Waxaa sharaf noo ah inaan wadaagno shaqada fanaaniintan hibada leh," ayuu yiri Eric J. Jolly, Ph.D., madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Mu'asasada. “Taariikh ahaan, xilliyada adag iyo qalalaasaha, fanaaniintu waxay safka hore uga jireen muujinta dalabkeena bulshada ee ku aadan isbadalka. Maanta, wixii ka dambeeya COVID-19 iyo wixii ka dambeeyay dilkii naxdinta lahaa ee George Floyd, fanaaniinta Minnesota ayaa dhaqankan sii wata. Waa lama huraan inaan codkooda ku xoojino adoo taageeraya shaqadooda iyo, shaqadooda, kobcinta fahamka iyo bogsashada xilliyadan adag. ”
"Farshaxanka xilligan xaadirka ah" wuxuu soo bandhigayaa shaqada 50 farshaxan oo ka soo shaqeeyay habab kala duwan muddo lix toddobaad ah. Fanaaniinta waxaa xushay 12 aan faa'iido doon ahayn oo ku baahsan gobolka oo dhan. Urur kasta waxaa la siiyay $5,000 si ay u taageeraan mashaariic cusub ama kuwa socda.
"Farshaxanka ayaa isku xiraya dadka," ayuu yiri Lee Sheehy, oo ah madaxweynaha ku-meel-gaarka ah ee Hay'adda McKnight Foundation. “Taageerada fanaaniinta, gaar ahaan kuwa dhisaya isku xirnaanta gudaha iyo wixii ka dambeeya bulshooyinka BIPOC, waa mid muhiim ah iyadoo aan ku dadaalayno inaan abuurno berri caddaalad badan. Sharaf ayey ii tahay in la aqoonsado oo la taageero fannaaniintan. ”
Qoraalka feylka: Ka hel macluumaadka asalka ah iyo sawirrada mashruucyada Qolka saxaafadda ee aasaaska.
Waxyaabaha soo socdaa waa sharaxyo kooban oo ku saabsan fanaaniinta la siiyay iyo mashaariicdooda; dheeraad ah at spmcf.org/art; kala soco fanaaniinta at #ArtInThisMoment.
Ururka Guryeynta Hindida Mareykanka (AICHO) - Sawir gacmeed lagu xardhay darbiga banaanka ee xarunta bulshada ee Duluth's Lincoln Park oo muujinaya taariikhda asaliga ah iyada oo loo marayo astaanta Anishinaabe ee Moira Villiard iyo Michelle Defoe.
Brownwe - Hawl-socod lagu doonayo in lagu dhaliyo “Tallaabooyinka Xurmada leh” ee ay wadaan Thomasina iyo Charles Petrus, Tiyo Siyolo iyo laxamiistaha Alex Shaw.
Arts Arts - Safar iskaashi faneed / madadaalo 'socdaal ah oo la qabtay ayagoo ku safraya RV si ay ula socdaan jilitaankooda, qoristooda iyo sameynta riyooyinkooda Adja Gildersleve iyo Ashembaga Jaafaru.
Adigana Ma Dareemaysid? - Dhaqdhaqaaqa, wada hadalka iyo isbadalka shaqsiyeed oo ay ka muuqdaan seddex farshaxan oo doonaya inay dhisaan bulshada Demetrius McClendon, Xiaolu Wang iyo Heather Peebles.
Gizhiigin Arts Incubator - Wadashaqeynta laba farshaxan - sameeyaha dambiisha Ojibwe iyo farshaxanjiraha weheliya - oo ka tarjumaya barbaarintooda faneed ee wadaagga ah ee 'White Earth Nation' oo ay wadaagaan Clyde Estey, Jr. iyo Kent Estey
Rootska asaliga ah - Iyadoo lala kaashanayo Mischief Mural, mural oo u dabaaldegaya afar magaalo oo mataano dhaqamo kala duwan leh qoob-ka-ciyaarka oo ay ku rinjiyeeyeen astaan dhaqameed Thomasina Topbear, Joy Slika, Holly (Miskitoos) Henning iyo Charles (Wanisin) Garcia, oo ay la socdaan ardayda farshaxanka ah ee Simone Tinker, AF Kimble iyo Cheyenne Gill .
Dhaqdhaqaaqa Milyan Faneed –Laba mashruuc ayaa la sameeyay oo ay ka muuqato barxad Power Tree ah oo astaan u ah baahida loo qabo in la isu keeno dadaallada si dadka madow looga xoreeyo fanaaniinta abuuray aagga George Floyd vigil; iyo, taageerida PI Growers Collective ee Frogtown Farms, rakibo farshaxan nool oo ku saleysan madaxbanaanida cuntada oo ay abuureen Stephanie Watts, Alejandra C. (Tobar Alatriz), Malia Araki Burkart, Marie Michael, Mamkwe Ndosi, Miré Regulus iyo Signe V. Harriday.
Aqoon isweydaarsiga Monkeybear ee Harmolodic - Qeyb yar oo wada shaqeyn ah oo ka tarjumeysa sheekooyinka ka dhashay kacdoonkii ka dhashay dilkii George Floyd ee Twin Cities, oo ay abuureen Ty Chapman, Andrew Young, iyo Rebekah Crisanta de Ybarra.
Masraxa Penumbra - Dhibcaha asalka ah ee fiidiyowga uu qoray Hannibal Lokumbe, oo ah muusigga shirkadda ee muusiga iyo jazz trumpeter, oo loogu talagalay abaalmarinta fiidiyowga ee George Floyd oo ay weheliyaan farshaxanno gacan ka geysta Brannen Temple, Reginald Carter, Jimmy Blazer, Colin Shook, Za 'Nia Sephra iyo Lou iyo Sarah Bellamy.
Somali House of Art - Shaqo abuur hal abuur leh oo ka timid afar fanaaniin Soomaaliyeed ah oo soo ifbaxaya Khadiija Muuse, Kaamil A. Haider, Maxamed Samatar iyo Maxamuud Muumin.
TruArtSpeaks - Krump, qoob ka ciyaarka dariiqyada oo muujinaya shucuur qaab aan rabshad lahayn waxaa abuuray oo sameeyay fannaanada Herb Johnson, III, iyo ceramista Gabrielle Grier waxay sharraxaysaa sida mashaariicdeeda looga buuxiyo sawirro, sheeko iyo nuxurka aqoonsigeeda.
Walker West Music Academy - Hees loo keenayo awood-siin iyo isku-kalsooni iyadoo dadka la isku soo dhaweynayo muusikiiste iyo macallinka Walker West William E. Duncan.
FANKA KU JIRA WAKHTAN WAQTIGA
Mawduuca: Farshaxanka, Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada